Iwo akanakisa kugoverwa kweLinux kwa2017 | Linux Vakapindwa muropa
Isu tatova mukati megore idzva 2017 kwemwedzi yakati wandei, uye inguva yekuita ongororo ye Kugoverwa kweLinux iyo yatinogona kuwana, chimwe chinhu chatatoita ne Linux kugoverwa 2016. Uye kunyangwe nyaya yacho ichigara ichimutsa kufarira, ichokwadi zvakare kuti inowanzounza kutsoropodza uye kutsamwa kubva kune vamwe vateveri. Uye chinhu ndechekuti kune akawanda uye akanaka kwazvo kugoverwa, akawanda sezvaunoda kana kunyangwe dzimwe nguva zvimwe, asi isu hatigone kuzvisanganisira zvese mune irwo runyorwa.
Nekudaro, pasina chinangwa chekukanganisa nharaunda dzekugoverwa izvo zvisipo mune yedu Wepamusoro 17 Linux distros yeiyi 2017, isu tichaenda kuratidza dzinonyanya kufarirwa. Ini ndinodzokorora, kugovera kwakanakisa ndiko kwaunonyanya kugadzikana nako, uye isu tinoziva zvizere kuti kune makuru mapurojekiti akasiiwa kubva pane runyorwa. Ndokusaka ini ndichikurudzira iwe kuti kana iwe ukashandisa imwe distro yatisina kunyora uye uchida zvimwe kupfuura izvi, tisiyei mhinduro ne distro yaunoshandisa uye nei ...
Kubva LxA isu takaongorora zvimwe zvakakosha zveLinux uye takagara nesarudzo iyi ye17 yavo. Zvekuongorora, migove yemamwe mashandisirwo kana yakagadzirirwa chete mamwe niches zvasiiwa, senge kugoverwa kwechiedza, kugoverwa kwevanyori, kwevatambi vemitambo, kweSBCs neIoT, nezvimwe, zvichisiya izvo chete zvekushandisa zvakajairika, izvo zviri iyo inotifadza isu chikamu chepamusoro chevashandisi. Isu vamwe tichava nenguva yekugadzira nyowani, zvimwe zvakanangana nezvinyorwa ...
Zvakanaka, pasina kumwe kunonoka tinotanga neyedu yepamusoro 17 yemazhinji distros yakakurudzirwa yegore rino, kwatakaisa "tag" kuti tione vashandisi. Zvakare, usakanganwa kutumira kwedu pa lightweight Linux distributions mauri uchawanawo akawanda anobatsira uye kushandisa mashoma masosi.
1 Arch Linux: yevashandisi vepamberi
2 elementaryOS: yevanoda dhizaini
3 Gentoo: kuyedza
4 Ubuntu: kune wese munhu
5 CentOS: yevavha-vakapindwa muropa
6 Linux Mint: yezvikafu
7 Debian: kune vakarwa muhondo
8 Debian + PIXEL: yazvino untethered
9 RHEL: kumakambani 1
10 SUSE: yebhizinesi 2
11 vhuraSUSE: Ini ndoda kuve nemiriyoni shamwari ...
12 Antergos: Ini ndakura, asi kwete zvakanyanya ...
13 KDE Neon: yeplasmoids isina mhinduro
14 Solus: vanoda minimalism
15 Fedora: Ini ndinoda zvinhu kuti zvishande mushe!
16 Liri: yevashanduki
17 Deepin: kune avo vari kutsvaga chimwe chakasiyana
Arch Linux: yevashandisi vepamberi
Arch Linux Iko kunakidzwa kweLinux kugovera iyo iwe yaunonyatso kuziva. Kune veNewbies, taura kuti haina kukodzera iwe, sezvo ichida hunyanzvi hwehunyanzvi, kushivirira, tsinga dzesimbi uye nenguva yakanaka kuverenga Wiki yayo. Ehezve, iyo Wiki pane yepamutemo webhusaiti yakanaka zvekuti iwe unowana chero chaunoda zvese ipapo.
Arch Linux inouya "isina" sekutaura, kana iwe uchida zvimwe zvekuwedzera senzvimbo yedesktop uye zvimwe zvirongwa, unofanirwa kuzviisa iwe pachako. Ndosaka zvichinetsa kune avo vasina ruzivo rwakanyanya, asi mukudzoka iwe une yakasimba kwazvo system inoshanda kushanda nayo, pamwe nekuchinjika kuigadzirisa kune chero chaunoda.
Izvo zvinoenderana pacman package maneja, iyo pamwe neayo AUR uye ABS system inogona kukuyeuchidza nezve mamwe maBSD-senge anoshanda masystem mune dzimwe nzira (zviteshi), sezvazviri naGentoo pamwe neepakeji manejimendi sezvatichaona gare gare ... Pamusoro pezvo, Arch mugadziri nharaunda inotevera Chirevo KISS, uko runako, kureruka (usazvivhiringidze nekureruka kwekushandisa), uye minimalism inotungamira kugadzira nzvimbo yakakwana. Iyo yekuvandudza nzira ndeye Rolling Kuburitswa.
Mamwe ruzivo nekutora - Arch Linux
elementaryOS: yevanoda dhizaini
Kune mamwe akawanda ma distros atingadai takaisa mumunda wedhizaini, asi sezvandakataura, havazi vese vanopinda mune ino post kana tisingade kuti iite yakareba. Tinogona kutaura nezve PearOS (iyo zvakare inotevera dhizaini yakafanana kune Apple's MacOS), kana nezve iyo inonakidza Zorin OS (mune ino ine Windows-dhizaini dhizaini kune vashandisi vanobva kuMicrosoft system), asi yaive yekutanga elementOS.
Iyo system elementaryOS ndeye Ubuntu based distro mune iko kusimbiswa kwakaiswa pane graphic dhizaini yayo interface. Zvimwe zvakasara zvakafanana nezvatinogona kuwana mune yakatorwa Ubuntu system, yeakawanda aripo. Nekudaro, timu yekusimudzira yakagadzira ino desktop desktop inonzi Pantheon Desktop, inovawo yakavakirwa paGNOME ine ganda rayo rinonzi Pantheon uye rinozvipa zita racho.
Dhizaini yezvakatipoteredza yakafanana chaizvo neinogona kuwanikwa muMac OS X kana macOS sezvavanozvidaidza kubva kukambani yeapuro. Uine dhoku inonzi Plank, uye maneja wepahwindo wemba anonzi Gala (zvichibva pa Mutter). Chokwadi ndechekuti chinotaridzika kunge chinonakidza uye chinoita kuti udanane iwe kana uchichiona, uye kunyanya zvakadaro neApp Store iyo yavakagadzira izvozvi (inonzi AppCenter) iyo yatatotaura nezvayo muLxA dzimwe nguva ...
Mamwe ruzivo nekutora - chepakutangaOS
Gentoo ndeimwe yekare, uye izvozvi zvandinotaura izvozvo, zvinouyawo mupfungwa Slackware. Ivo vakafanana mune zvimwe zvinhu, asi isu takazopedzisira tasarudzira yekutanga yeTop17 yedu. Izvo hazvisi nyore kushandisa, sezvakaita neArch uye Slackware, saka newbies anofanirwa kugara kure nemhando idzi dzemastros. Nekudaro, ivo vanofarira vepamberi, sezvo vaine zvisingaite kugona.
Chimwe cheye chinokwezva chakavakirwa pane sosi mapakeji aanoshandisa, neayo Portage mapakeji. Kana iwe uchirangarira muchikamu cheArch, ndati iyo Gentoo inogona zvakare kufanana kune mamwe maBSD anoshanda masystem senge FreeBSD, nezvimwewo, nekuda kwepakeji-kunge mapakeji atinoona pane aya masisitimu. Saka kana iwe uchibva kunzvimbo yeBSD, pamwe Gentoo pamwe chete neArch ndiwo akakodzera ma distros iwe.
Kana iwe ukatora kufamba pamambure, iwe uchaona kuti ndizvo dhizaini yemugwagwa, sezvo ichigona kuchinjaniswa nenhamba hombe yemidziyo. Isu takaona iyi distro yakaiswa zvese mumutambo mutambo, senge mumotokari yeTesla, nezvimwe. Ndokusaka ndazviita distro kune avo vanofarira kuongorora uye kuyedza.
Mamwe ruzivo nekutora - Gentoo
Ubuntu: kune wese munhu
Zvekare tinopinda mune imwe nharaunda, nekuti tinotaura nezvayo Ubuntu neUni Shell uye kune zvakawanda zvinonaka (Kubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME,…) yeiyi Canonical distro, zvakaenzana zvakanaka uye nyore kushandisa kune avo vanosvika. Chinhu chakanaka pamusoro peCanonical distro yakabudirira ndechekuti yasvika kune wese munhu, inoshandiswa nevese novice nevashandisi vepamberi uye iri kutaridzirwa kune akawanda mapurojekiti kubva kuSETI, NASA, nezvimwe. Naizvozvo, iko kugoverwa kwezvose uye nemunhu wese.
Makore mashoma apfuura akaunzwa se Linux yevanhu, sezvo yakavakirwa paDebian uye ivo vaive vakwanisa kuita chirongwa ichi chinotyisa chimwe chinhu kuti chishandisike kune chitsva. Iyo inoshanda sisitimu iyo mune zvimwe zvinhu inotiyeuchidzawo nezveApple uye kuti zvese zvakagadzirirwa kuita kuti hupenyu hwako huve nyore paunenge uchiishandisa, iine hombe nharaunda kuseri kwayo, dzidziso zhinji uye mapeji ekubatsira pamambure, uye zvakanyanya kukosha, a yakawanda software mapakeji kwaari.
Kana izvo zvichiratidzika kunge zvidiki kwauri, iri yakagadzikana uye yakasimba sisitimu, ine ese mabhenefiti eLinux uye kumwe kubata kwekureruka uye hunyanzvi. Uye hunhu hwekupedzisira huripo chaizvo, sezvo Canonical iri kuyedza kwazvo kusiyanisa kubva kune vamwe uye vakatanga zvirongwa zvikuru zvinoenderana nazvo (kunyangwe vamwe vachidarika miganhu yeUbuntu). Ndiri kutaura, semuenzaniso, nezvekubatana kwavakavimbisa, cheMir grafiti server kutsiva iyo yekare X, kana yeimwe shanduko senge Tora mapakeji.
Mamwe ruzivo nekutora - Ubuntu
CentOS: yevavha-vakapindwa muropa
Iyo ndeimwe ye "trendy" distros, kana uchikwanisa kudaro. Iye achiri mudiki, asi nguva pfupi yadarika anga achipa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye nani. Iyi forogo yeRed Hat RHEL distro. Asi nharaunda irishure kwayo yanga ichida kuivhura zvishoma uye iite 100% yemahara. Iyo haina kana kana shanje yekuitira godo hanzvadzi yayo yakura yebhizimusi, zvisinei, CentOS ndeye mahara uye inogona kuve inonakidza imwe nzira yekushandisa zvese pakombuta yako yekumba uye pamaseva ako.
Zita rayo rinobva Nharaunda ENTerprise Inoshanda Sisitimu, uye sekuratidzwa kwezita rayo, zvave zvichifungidzirwa kumakambani, uye mahara zvachose kubvisa zvikamu zvinongedzera kumaki uye marogo eRed Hat nemamwe mapakeji. Asi iyo inogadzirwa kubva kuRHEL kodhi, uye zvakare yakasimba kwazvo, yakagadzikana, yakachengeteka, uye nyore kuisa nekushandisa. Ehezve, yakavakirwa paRPM mapakeji.
Kukosha kwaro kwakapinda mumakambani mazhinji nevashandisi vakazvitora sedistro yavo huru, uye zvakare munharaunda dzakakosha dzesainzi. Ndiyo nyaya ye CERN, iyo kereke huru yesainzi yaisa parutivi yavo Scientific Linux (yakavakirwa paRHEL) kuti vagadzire nzira yavo nyowani sisitimu inoenderana neCentOS yekushandisa munzvimbo dzesainzi uye kuti iwe unogona zvakare kurodha pasi kubva kuCERN webhusaiti ...
Mamwe ruzivo nekutora - CentOS
Linux Mint: yezvikafu
Kana iwe uchida kuve nyore, minimalism, uye nyore kushandisa pasina kusiya yakanaka distro, Linux Mint ndizvo zvauri kutsvaga. Kubva zvawakaonekwa, yakafadza vazhinji, uye hazvishamise. Iyo yekuvandudza nharaunda iyo ine uye kumashure kwayo yanga iri mukutarisira kwekutora Ubuntu / Debian, pane iyo yakavakirwa, uye nekuipa iyo yakazara facelift kuti ishandure iyo ive yayo yekupedzisira chigadzirwa.
Iyo yakagadzika sisitimu, inogara ichigadziriswa kune yazvino, inoshandiswa, iri nyore kuisa uye yakanangana nemushandisi wepakati. Iyo zvakare inosanganisira akawanda pre-akaiswa software mapakeji, saka haufanire kunetseka nezve software mune akawanda kesi. Saizvozvo, nharaunda inosimbisawo kusanganisa kwemahara mapakeji. Uye kubva kwairi kwakauya chirongwa cheCinnamon, icho pakutanga chaizove chinzvimbo che desktop yeMint uye zvazove zvakapararira.
Kubatanidzwa kwemamwe maturusi avakagadzira kunyanya kwaari kwakamira, senge mintsoftware, zvimwe zvishandiso zveMint izvo zvinokubatsira iwe nemazhinji emabasa ezuva nezuva uye zvinoenderana ne graphical interface. Iyi ndiyo mamiriro eMintupdate, Mintinstal, MinMenu, Mintupload, MinBackup, MintNanny, nezvimwe. Uye zvese izvi, zvine mwenje uye zvakakwana nharaunda desktop senge MATE neCinnamon kusarudza kubva ...
Mamwe ruzivo nekutora - Linux mint
Debian: kune vakarwa muhondo
Zvekare isu tinokwanisa kurangarira mamwe ma distros, senge MX Linux izvo zvatakambotaura nezvazvo, asi isu tichaisa pfungwa pana Debian. Iyo ndeimwe yemahara emahara software mapurojekiti andinoziva uye anofungidzirwa nevazhinji kuve iwo yakanakisa linux yechirongwa. Nharaunda huru yekusimudzira ine huwandu hwepfungwa uye mafilosofi ayo ayo anofanirwa kuongororwa muDebian Manifesto.
Iyo projekiti yaive yeimwe yekutanga maererano neLinux distros, ichibuda muma90s nekuda kwekupedzisira Ian Murdock. Iye wechiGerman ndiye aibata basa rekugadzira zvese izvi macrojekiti akazotevera apfuura nemamwe maoko, sezvo vatungamiriri vavandudzwa. Uye kunyangwe isu tichingofarira Debian GNU / Linux pano, zvinofanirwa kutaurwa kuti chirongwa ichi chinoenderera mberi uyezve kune dzimwe tsanga dzinopa hupenyu kunaDebian senge GNU / Hurd, NetBSD, kFreeBSD, yatatotaura zvakawanda muLxA.
Zvakanaka, Debian yakanaka sarudzo yedesktop yako, uye zvirokwazvo iri kana iwe uchida kuvaka sevha. Iyo yakavakirwa pane DEB mapakeji senge zvigadzirwa zvavo, uye pasuru manejimendi kuburikidza neAPT. Kukura kwayo kunononoka, zvinotora mwedzi nemwedzi yebasa rakasimba kusvika vhezheni nyowani yedistro yaonekwa, asi mhedzisiro ndeye yakavimbika, yakasimba uye yakagadzikana system, yakabwinyiswa kusvika pakupedzisira. Pakati penzvimbo dzedesktop dziripo, unogona kusarudza kubva kuzhinji, kuti ugone kushandisa iyo taviro yaunofarira pasina matambudziko ...
Mamwe ruzivo nekutora - Debian
Debian + PIXEL: yazvino untethered
Kune akawanda mwenje distros, uye muLxA isu tatoita kuenzanisa kweizvi, uye isu ticharamba tichidaro. Takazeza pakati LXLE uye PIXEL yechikamu ichi, uye PIXEL yakazopedzisira yatonga nezvehujaya hwayo uye nekuve mutsva panguva ino. Iyo Raspberry Pi Foundation yaita basa rakakura kune yavo RaspbianOS distro iyo inoisa pane inozivikanwa SBC mabhodhi, asi yavo purojekiti yenzvimbo nyowani yedesktop yakakonzera PIXEL, yadarika nekuenderera uye inowanikwawo kuisa paPC neDebian base.
PIXEL inouya kubva Pi Yakavandudzwa Xwindows Nharaunda Yakareruka, uye zita rayo rinosiya zvishoma kune fungidziro, sezvo iri isina kuremara desktop nharaunda, yakavakirwa paX grafiki server uye yakanyatsogadzirirwa iyo Pi bhodhi. Shanduko hombe dzakaitwa kune iyo interface kuti iite minimalist, yakapusa, yakajeka uye inoshanda. Uye izvo zvinoonekwa pakuonekwa kwedesktop, ma icon, windows, mafonti uye mamamenyu, ayo anoratidza basa rakanaka rekushongedza.
Kana kune iyo nharaunda iwe unowedzera zvese zvataurwa pamusoro naDebian, ipapo isu tine iyi Debian + PIXEL kuitira kuti maPC edu ave anoshamisa maitiro ekushandisa, kutsiva LXDE, uye mune mamwe maapplication matsva akabatanidzwa.
Mamwe ruzivo nekutora - pixel
RHEL: kumakambani 1
Red Hat Enterprise Linux kana RHEL sezvazvinozivikanwa, ihurongwa hwekushanda hunomuka kubva kubasa rakakura rekambani yeRed Hat, hongu, iyo yakaunganidza mamirioni emadhora kutengesa ... chimwe chinhu chemahara uye chakavhurika sosi? apo rudzi irworwo rwebhizimisi rwaiita serusingabviri. Red Hat ihofori, asi pakanga paine nguva payakatanga sekambani diki asi ichipayona. Chinangwa chavo chaive chekugadzira yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu yakagadzirirwa makambani, uye nekudaro ivo vanovavarira kubatanidza nhamba hombe yemapakeji, matekinoroji uye kuita mubatanidzwa kuti vave neprojekti panguva pfupi yapfuura.
RHEL ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kana iwe uine kambani, nekuti iwe unenge uine yakagadzikana, yakasimba, yakachengeteka sisitimu yekushandisa uye kana uchida, iine runako rwakanaka rwehunyanzvi rutsigiro kumaseva ako, mainframes uye supercomputers. Zvinangwa zvakagadzwa zvakatarisa kune gore uye kuona, tekinoroji pakukwira uye mukuda kukuru mukambani.
Mamwe ruzivo nekutora - Red Hat
SUSE: yebhizinesi 2
Pane zvishoma zvekutaura nezve SUSE Linux Enterprise yakapihwa izvo zvataurwa kare muchikamu chekare chekambani yeAmerica. Mune ino kesi, SUSE ikambani yeGerman ine chinangwa chakafanana, kugadzira yakanakisa sisitimu inoshanda yemakambani aripo. Saka iyo distro isarudzo yakanaka kumaseva, supercomputer, uye mainframes. SaRed Hat, ivo vanga vakatarisisa kugadzirisa uye kugadzirisa matekinoroji ebhizinesi rekufarira, senge gore uye kuona.
Vakagadzira zvakare kubatana kukuru nevechitatu mapato kuti vape mamwe masevhisi mazhinji anonakidza, senge anozivikanwa mubatanidzwa neSAP, pakati pevamwe. SaRHEL, SUSE zvakare inovimba neRPM mapakeji, asi kune mamwe akakosha misiyano. Semuenzaniso, RHEL inoshandisa SELinux sechiwedzerwa chekuchengetedza, nepo SUSE yakagadzira AppArmor, kana maturusi atinowana muRed Hat tichienzanisa neicho chingangodaro chimwe chezvishandiso zvakakwana, zvine simba uye zvakapusa zvehurongwa hwehutongi senge YaST kubva kuSUSE .
Mamwe ruzivo nekutora - SIWIZARENDI
vhuraSUSE: Ini ndoda kuve nemiriyoni shamwari ...
vhura ndeye KUSVIRA iyo CentOS kana Fedora iri kuRHEL. Iyo yekuvandudza nharaunda yakagadzira ichi chinobva cheSUSE yevashandisi vekumba, yakakwana kwazvo, ine simba, yakasimba uye yakagadzikana distro yakavakirwa paRPM mapakeji uye ine rutsigiro rwemakambani senge SUSE pachayo uye AMD. Iyi inogona kunge iri yeimwe yenzvimbo dzakawanda kwazvo dzekuvandudza pamwe nenharaunda dzevashandisi, saka unenge usiri kushaya "shamwari" dzekukubatsira kana uine matambudziko.
Iyo inouya nemhando dzakasiyana dzemamiriro edesktop yekusarudza kubva, uye ndeimwe yezvandinoda. Iyo ine Zypper package maneja uye zvakare yakakura uye ine simba Chishandiso cheYaST2 izvo zvichagadzirisa chinenge zvese. Zvakare, semamwe ma distros, ine AppAmor yekuchengetedza, uye ine kusangana kwemapurojekiti makuru senge Xen yehunyanzvi, nezvimwe, kugovana maficha mazhinji neSUSE Linux Enterprise.
Mamwe ruzivo nekutora - vhura
Antergos: Ini ndakura, asi kwete zvakanyanya ...
Zvichida vamwe venyu vari kuverenga izvi vauyawo mupfungwa Manjaro. Mune ino kesi, iye akasarudzwa anga ari muGalician Antergos. Zita rayo rinobva pazwi reGalician "madzitateguru" uye rinoratidza chinongedzo nezvakare izvo izvo distro zvine. Uye kutaura nezvemapurojekiti eGalician, zvirokwazvo warangarirawo imwe inonakidza distro, Trisquel ... Kudzokera kumusoro wenyaya, chirongwa ichi chaimbozivikanwa seCinnarch, sezvo ichivakirwa paArch Linux (uye ikozvino iwe uchanzwisisa zita reti).
Alexandre Filgueira ndiye akaigadzira, uye akashandisa iyo Cinnamon nharaunda seyakagadzika hwaro hwayo distro, kunyangwe vashandisi vakapiwa rusununguko rwekusarudza pakati pedzimwe nharaunda nharaunda (MATE, Xfce, Openbox, KDE, GNOME,…). SaArch, yakavakirwa paPacman package maneja, asi mukufarira Antergos, kutaura kuti zvave zvichifungidzirwa kuti zvishoma zvine hasha pakushandiswa kupfuura amai vayo Arch.
Mamwe ruzivo nekutora - Antergos
KDE Neon: yeplasmoids isina mhinduro
Kune vanoda iyo hombe KDE chirongwa uye Plasma nharaunda, unogona kuzvida KDE Neon. Iyo distro mavaida kuratidza mabhenefiti eKDE Plasma. Icho chirongwa chidiki, uye kuchipeta nemazwi mashoma, idombo rakasimba, rakatsiga uye rakanaka kugovera iro rakakonzerwa nebasa rakaoma renharaunda yeKDE yekuvandudza.
Izvo zvinoenderana Ubuntu LTS, uye tora kubva pairi mabhenefiti eCanonical distro kwavakawedzera iyo Plasma desktop desktop. Zvinogona kukuyeuchidza zvishoma nezve Kubuntu, asi mune iyi kesi ini ndinofunga zvine zvazvakanakira, kunyanya maererano neshanduro dzayo, dzinoita senge dziine mvura, kutangazve Kubuntu pasi pemamwe mazita anovimbisa ...
Mamwe ruzivo nekutora - KDE Neon
Solus: vanoda minimalism
Solus chirongwa chechidiki chakaonekwa nguva pfupi yadarika uye icho chakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo maererano nehunyanzvi maererano nemamiriro edesktop. Yakaonekwa saSolusOS uye ikozvino Solus Project, Ivo vaida kumutsiridza madhesiki atakange taona kudhara, kuunza kubata kwechatsva uye chimwe chinhu chitsva neinonakidza mitsva.
Key Doherty naJustin Krehel vakafunga kuti vanogona kugadzira chimwe chinhu kubva pakutanga vachishandisa iyo LFS (Linux Kubva Kukanda) chirongwa, vachishandisa eopkg semaneja wepakeji, uye zvakanyanya kukosha uye zvinotyisa, yavo desktop desktop. Budgie Desktop yakavakirwa paGNOME 3 uye chiyeuchidzo cheGNOME 2 yeiyo nostalgic. Icho chakareruka uye chine chitarisiko chemazuva ano, saka une chokwadi chekuchida.
Mamwe ruzivo nekutora - Solus Project
Fedora: Ini ndinoda zvinhu kuti zvishande mushe!
Pane zvishoma zvekutaura nezvazvo Fedora, yatove chiitiko chekare chakabuda kubva kuRed Hat. Yakagadzikana, inoshanda, chiizve chaunoda? Pamberi payo inzvimbo yakanaka yekuvandudza uye vashandisi, zvakare inotsigirwa neRed Hat kukwidziridzwa, uye yakavakirwa seizvi paRPM uye iyo RPM Package Manager package package. Iyo zvakare inosanganisira iyo DNF yekuvandudza system, uye rutsigiro rwehardware runowanzoenderana chaizvo.
Iyo ndeimwe yeanonyanya kufarirwa ma distros zvinoenderana neDistroWatch uye inogovera zvimwe zveayo maficha neRHEL, sezvinoita CentOS. Imwe yadzo inoreva chengetedzo chimiro, kusanganisira SELinux. Kutenda mukuzivikanwa kwayo kwakaburitsa mamwe akawanda ma distros akavakirwa pairi ...
Mamwe ruzivo nekutora - Fedora
Kana iwe uchinge warasikirwa nezvirongwa zvakaita seHawaii nePapyros, usazvidya moyo, maruva inouya kuzobatanidza zvese. Iyo purojekiti iri nyowani nyowani, yakavakirwa paArch Linux, saka hwaro hwakakosha, uye kuunza pamwechete kuyedza kwemamwe matunhu ebudiriro akadai seHawaii (mapiyona muWayland, maraibhurari eFUid, kana QML / Qt5 muzuva rayo), maLiri anoshanda uye iyo Papyros distro (kana Quartz OS sekuzivikanwa kwayo pakutanga).
Kana iwe ukaisa zvese izvo pamwe uye wozviisa mukuzungunusa, mhedzisiro yacho LiriOS. Iyo distro iyo isingazongokwezva iwe nehunyanzvi, asi zvakare yekuona. Uye imhaka yekuti ivo vakapaza nezvose zvinoonekwa kusvika zvino uye vakagadzira kubva pakutanga, uye vakashandisa Material Design kubva kuGoogle (iyo imwe chete inoshandiswa nehofori yeiyo Android interface) kugadzira minimalist, hunyanzvi, yakajeka uye yakapusa desktop desktop. Zvese zvakarongedzwa nemifananidzo uye zvirongwa zvako zvaungade.
Mamwe ruzivo nekutora - Liri
Deepin: kune avo vari kutsvaga chimwe chakasiyana
Isu tinopedzisa neimwe yave ichitsvaga huwandu hukuru hwevashandisi mumakore apfuura. Mune ino kesi inouya kubva kuChina, uye ivo vaita basa rakanaka munzira dzakawanda, kunyangwe paine zvimwe zvekubonyora uye izvo zvisingaitike muDebian, iyo distro iyo yakavakirwa. Ini ndinotaura nezvazvo Deepin (yaimbozivikanwa seHiweed Linux).
Zvinonyanya kukosheswa nevagadziri vayo kugadzira nzvimbo yakatsiga, yakachengeteka, inoyevedza uye inoshandisa mushandisi. Neichi chikonzero, rakawanda rebasa rave kuitirwa kugadzira nharaunda ye desktop nyowani inonzi DDE (Yakadzika Desktop). Iyo yakavakirwa paQt5 uye inosanganisira yekushandisa chitoro uye ayo maapplication ausingawane mune mamwe masystem
Mamwe ruzivo nekutora - Deepin
Rangarira siya zvaunotaura nekusahadzika, mazano, maonero, nezvimwe. Ndinovimba iwe wakafarira ichi chinyorwa uye, kune avo vatsva kune ino nyika, kuti chakubatsira iwe kana wanga usina kusarudza kuti ndeipi distro yekusarudza.
Tiudze, chii chinonzi Kugoverwa kweLinux chii chimwe chaunoda?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Iwo akanakisa kugoverwa kweLinux kwe2017
Yakanyanya kusarudzika sarudzo yeDistros
Mint zvakare ine KDE Plasma
Pindura kuna Alo
Joseph Bernal akadaro
Manjaro, chii chakaitika?
Pindura kuna Jose Bernal
Iyi posvo iri pamusoro ndeye Manjaro
Asi ndiani asiri saga munzvimbo idzi? zvakaipa kwazvo
Ndanga ndiine OpenSuse Tumbleweed kwegore seye chete system, uye ndiri kufara kwazvo.
Elementary kwandiri, ikozvino sezvo runako rwekugadzirwa kwayo rwapfuura, kwandiri rwuchazodzikira. Uye Mint pamusoro ...
Carlos Fidel Casarrubias akadaro
Kugovaniswa kweLaptop inoshanda chete neWindows XP?
Ine zvishoma zviwanikwa, Windows 7 inoshanda mushe, asi inononoka.
Pindura Carlos Fidel Casarrubias
Debian neXFCE kana LXDE / LXQT.
Ndiri kuenda kunoongorora kugoverwa uku.
Linux Mint ine XFCE desktop, pasina mubvunzo. Ndiri kuishandisa pane 2Ghz Intel Core-Duo laptop (kwete Core2-Duo) uye inoshanda sepfuti. Pakutanga ndaishandisa pane 1Ghz Pentium-M imwechete yepamoyo laptop ine 73GB ye RAM uye inofamba zvine mutsindo, zvirinani pane Windows XP. Sechinhu chakanyanyisa, ndakachiisawo pane 1'4Ghz Pentium-3 laptop ine 06GB ye RAM uye inogona kushanda, kunyangwe iwe uchifanira kunge uine moyo murefu zvishoma, asi ichiri kushanda zvirinani pane Windows XP.
Windows XP inoenda nekukurumidza zvakanyanya pamakomputa anoshanda pasina mukana wekuwana network uye izvo, nekudaro, haidi antivirus, asi kana uchifanira kuwana internet uye kuisa antivirus, zvakakodzera kuti ushandire kuLinux Mint XFCE nekuti inoshanda zvakanyanya zvirinani uye zvakachengetedzeka zvisingaperi, pasina kubayira nyore kumwe chete kwekushandisa seWindows.
Lubuntu kana AntiX, asi zvingave zvirinani kana iwe ukataura zvakatemwa palaptop.
(KwaCarlos Fidel Casarrubias):
Wanga uchibvunza iwo mubvunzo nguva refu yapfuura, uye nenguva yemhinduro iyi ndinofungidzira iwe waedza mamwe ekurudziro, pamwe nedzimwe sarudzo. Ndokurudziro yangu yekutanga: edza imwe neinotevera, uye usazogadzirise yekutanga inoita kunge mhinduro. Kana iwe uine sarudzo yekurodha pasi maIO uye nekuapisa iwo kuCD kana DVD, vapeyese (iyo USB bhatani sarudzo inowanzo kutongwa kunze muBIOSes dzekare). Kubva pane zvandakaona ndichiisa kugoverwa kweGNU / Linux pamakomputa ane makore anodarika gumi ekushandira, ini ndichakuudza kuti hunhu hwekuparadzirwa kwakagadziriswa (ndiri kurangarira Debian pachayo ...), uye nemamiriro akajeka emifananidzo, atove kuda zvimwe zvinodiwa zvehardware. zvimwe zvakagadziridzwa (tsigira PAE, NON-PAE, nezvimwewo). Ini ndakashamiswa neCrunchBang pamidziyo yekare, ichiripo. Munguva pfupi yapfuura, kumutsiridza kabhuku kekubva muna 2003 (Acer TravelMate, ine Intel Pentium M processor), uye kare mamwe maPC desktop ane makore angangoita gumi nemashanu, uye mushure mekuyedza gumi nemaviri distros, iyo yakapindura zvakanyanya uye yakandishamisa ndeye Q15OS (Orion) yakavakirwa pane yakagadzika Debian, iine Utatu desktop desktop Ini ndinotora uyu mukana wekutenda basa revagadziri veichi chiGerman kugovera kunyanya uye zvakajairika kune vese GNU / Linux vanogadzira.
Kana iwe uine chero zano zvauri kuita, iwe une Tiny Core kana kunyange Porteus Kiok iyo inongobata chete 80 MB yekurangarira, chete izvo mune izvi iwe unogona chete kushandisa Chrome kana Mozilla.
Linux mint yakagadziridzwa kune yekupedzisira, haina kuita senge uye zvishoma kuve lts.
Zvakanaka, Mageia haipo, kumwe kugovera kwakadzikama kwandakamboedza, vhezheni yayo 6 ine Plasma KDE 5 yave kuda kuburitswa.Uye pasina mubvunzo kana mumwe munhu achida kuve nedhizaini, ndinokurudzira kuti iwe uise imwe yacho ne KDE. Kune mimwe miedzo skrini yedesktop yangu ine (Mageia 5.1 KDE)….:
Pindura kuna joselp78
mmm handizive kana chinyorwa ichi chichava chakanyorwa zvakanaka, asi zvinoratidzika kwandiri kuti zvinopa kuvhiringidzika zvine chekuita nekumwe kugoverwa kwakadai seGentoo, Slackware uye Archlinux. : /
Kwandiri, Chakra iri pamusoro zvakanyanya kupfuura mazhinji emastros akataurwa
Pakati pezvakanakisa neiyo KDE / Plasma desktop, yakasimba uye yakavimbika sezvo iri hafu yekuburitsa kuburitsa: D uye ari mwanasikana weakakura Arch distro.
Elementary yakasiya kuravira kwakashata mumuromo mangu sezvo ganda rakarwisa nharaunda.
Kana iri Antergos, kunyange iri Arch, haina kana chekuoma kwayo, kwete zvachose ... chinhu "chakaoma" chete kusarudza kana uchiisa iyo desktop yaunoda ... kana iwe usiri kuziva kuti kune akasiyana madhesiki , nezvimwe. Sooooo rookie. Kana zviri zvekubata zvese zvimwe, zvinoita kunge zvakapusa kwandiri: haufanire kutenderera uchitsvaga uye uchiwedzera matura ekuisa zvimwe zvinhu; chinenge zvese (zvakanyanya kupfuura muUbuntu) zviri mune yepamutemo repository uye Aur.
Nhema Simbi akadaro
Ndeipi distro yaunokurudzira iwe webhu, Android uye desktop programmer?
Ndiri kushandisa Xubuntu izvozvi pane laptop ine simba shoma uye ndinoifarira zvakanyanya, ndine imwe laptop ine simba, i7, 2.1 GHz uye 6 Gb yegondohwe ndangariro, ndakashandisa OpenSuse munguva pfupi yapfuura asi ini handizive .. ini usazere seichi, zvinoitawo makore andakashandisa Ubuntu "pandakatanga" uye Linux Mint.
Chii chaungakurudzira kana kukurudzira?
Pindura kune Dema Simbi
T hutachiona akadaro
Mhoroi, wakamboedza Fedora neXfce (iyo Xubuntu desktop nharaunda)?
Ini ndinofunga zvingave zvakanaka kwazvo kwauri. Pano ini ndawana yakadzama uye yakagadziridzwa gwara iyo inokuudza iwe kuti ungaiisa sei: https://militantepsr.wordpress.com/2017/02/07/instalar-fedora-gnulinux-para-liberarse-de-windows/
Ndinovimba izvi zvinogona kukubatsira. Kwaziso.
Pindura Virus T
Ini ndinofunga migove yakapihwa yakanaka kwazvo, ndinokukorokotedza nekuda kwekuburitswa
Kwandiri, iyo iyo yakandipa iyo yakanakisa mhedzisiro kusvika ikozvino Linux Lite. Nezve kuve kwakanakira zvekare macomputer kana malaptop.
Kwazisai uye endererai neiri basa rakanaka iro rese reLinux, iwe unofanirwa gumi.
Iyo isina kuneta Slackware yakashaikwa.
Pindura kune sh2central
Yakanaka, kunyangwe ini ndichishandisa Manjaro nekukasira ndinofunga Antergos iri rakanakisa distro. Uye ini ndichaenda kunoona maitiro aLiriOS, zvinoita kunge zvakakura kwandiri, zvinoenderana neyangu inodiwa Arch uye inonakidza kwazvo inoonekwa.
Ini pachangu, ndinofunga rondedzero yacho yakanyatsoitwa, kunyangwe ndaizove neshanduko diki diki pane zvandinofarira, asi zvikuru, ndatenda nemupiro
Pindura ku lumcab
Mushure memakore mazhinji ndichitsvaga yakakodzera distro (ndokuti: yakanaka, yakanaka, yakapusa kuisa, nyore kushandisa, inogadzirisika uye yakajeka) ini ndasara, nhasi neimwe yausingataure: Manjaro KDE.
KDE yakajeka kupenya kupfuura Neon kana OpenSUSE, yakapusa kushandisa kupfuura KaOS (imwe KDE mwenje distro) yakanaka, yakanaka, kupfuura "isiri-KDE" (unogona kutaura kuti ndinoda Plasma?) Uye zviri nyore kuisa uye kumisikidza kupfuura Arch, RHLE- CentOS, Gentoo, kana Antergos.
Mint Cinnamon yaizove yangu yechipiri sarudzo.
Ubuntu Kubatana, Deepin, uye Zorín zvakare akanaka, ari nyore uye akareruka, asi zvakazara ndinofarira iyo yakaratidzwa. Ini ndinoda Fedora, asi ndinobva KDE, uye haina kunyanya kujeka futi.
Kana Manjaro KDE ikauya kuve neYast2, zvingaite sekusatarisa kune imwe distro ;-)
Mushure memakore mazhinji ndichitsvaga iyo "yakanaka" distro (ndokuti: yakanaka, yakashongedzwa, yakapusa kuisa, nyore kushandisa, inogadziriswa uye isina huremu) ini ndasara, nhasi, neiyo yausingataure: Manjaro KDE.
Pakutanga, inoshandisa KDE iri pachena kupenyerera kupfuura Neon kana OpenSUSE, "inoshandisika" kupfuura KaOS (imwe mwenje KDE distro), yakaisvonaka, inoyevedza, kupfuura iyo "isiri-KDE" iyo (unoona here kuti ini unoda Plasma? Lol) uye zviri nyore kuisa nekugadzirisa kupfuura Arch, RHLE-CentOS, Gentoo, kana Antergos.
Mint Cinnamon yaizove yangu yechipiri sarudzo, ichiteverwa naDepin (refu rarama Qt5)
Ubuntu Kubatana, Deepin uye Zorín zvakare akanaka, ari nyore uye akareruka, asi zvakazara ndinofarira iyo yakaratidzwa. Ini ndinoda Fedora, asi ndinobva KDE, uye haina kunyanya kujeka futi.
Linux ndeye mapenzi mapenzi asingazive mashandisiro windows uye vanoda kunzwa zvakanyanya pro kuisa imwe OS iyo ivo vasingazive kushandisa zvakanaka.
Sei? Kana ichifungidzirwa kuti kana iwe ukaenda kuLinux imhaka yekuti Windows kana chero OS haikukodzere, zvakare ndosaka kune akawanda masisitimu anoshanda evanhu vasingaverengeke. Wese munhu anotarisa OS iyo inokodzera ivo uye kushandisa Linux unofanirwa kuva nezvishoma (zvinoenderana nedistro) ruzivo rwakawanda, ini ndichafungidzira kuti yako yekutaura inongotaura iwe chete.
shamwari yangu akadaro
Linux inoda hunyanzvi hwemakomputa. Windows kwete. Windows ichine antediluvian internet kubatana (kunze windows 10), linux haina. Mahwindo anorwiswa nemavirusi ese (kutaura zvazviri, akagadzirirwa iyo), linux, zvakati wandei. Ini ndinoramba ndichitsanangura misiyano, shasha?
Ayyyyy, Mwari, panofanirwa kugara paine mumwe munhu aripo, kana pane chero nguva iwe wanga uchitaura chokwadi, neaya anoshoreka matoni iwe unorasikirwa nawo
Nestor Gomez akadaro
Zviripachena kuti chirevo kubva kushamwari Juan chiri pachena visceral, iyo inoratidza kutya kukuru kwekumuka kwenharaunda yeGNU / LINUX. Uye zvinotarisirwa kune vakatapwa veWindows, kana Microsoft ichibvuma nekupa nzvimbo zhinji uye zhinji. Ivo vakangwara kwazvo, ndinovimba vateveri vavo futi.
Pindura kuna Néstor Gómez
Wakatadza, nekuti uchangobva kutsanangura mushandisi weWindows.
Izvo zvese zvaunoziva iwe kubaya uye hapana chimwe chinhu.
Kana iwe ukadzidza kumisikidza uye kuisa yako «uindous» unotozvifunga wega tekinoroji
Ini ndinokurudzira kuita runyorwa rwakafanana asi nezvakanakisa izvo zvisingashandisi SystemD nekukasira, nekuti vazhinji vacho vanoshandisa systemd uye mushe vashandisi vazhinji havazvifarire, kana vachidaro ini ndinokurudzirawo kuiswa kweManjaro OpenRC Xfce
kushaya VOID, yakanaka.
Ndinoona kuti semazuva ese Linux ine chimwe chinhu pane zvese zvavanofarira, ini ndine KDE inonaka seyakanyanya, handina kuona kuti vakataura Maui kde kuti ndinayo pane inokurumidza 64gb pendrive uye yaikurumidza uye yakanaka kupfuura Neon, pane imwe peni ndine linux mint kde yakanaka kwazvo, ini ndinoiwanawo yakanakisa Azorín GNOME. Zvimwe zvese zvandaiyedza, handina kudanana.
Pindura Jorge Luis
Ini ndanga ndichivhura openuse 42.2, uye kazhinji zvaiita senge inonakidza sisitimu, asi ini ndine matambudziko nemifananidzo (Kana uchichinja desktop necube mhedzisiro, inotsamwisa bhokisi dema inoonekwa), bhatiri rinogona kunge riri chikonzero chekusiya parutivi izvozvi kuti pese pandinobvisa laptop uye kuchaja bhatiri iyo system inomira uye ndinofanira kumbomira zviitiko zvangu kusvika zvave kuda kuchaja zvakare.
Zvakanaka apo ini ndichaedza nedebian uye kana zvakafanana zvikaitika, saka zvinondivhurira zvisirizvo kufunga zvakaipa nezve openuse.
Pindura kuna HorusBlack
Deepin yakachengeteka distro?
Kuuya kubva kunyika yemakomunisti iyo inosora nekudzora vagari vayo zvakanyanya sezvinobvira nekutumira kujeri avo vanotenda nenzira inopesana nehutongi hwayo nekutengesa nenhengo dzavo?
Handitende, ndakaiisa kuti ndiyedze. Asi ndakazoibvisa gare gare. Uye kufunga kuti vanhu vanotenda kuti iri yemahara OS, pasina kuongorora mamiriro ezvinhu ayo akagadziriswa (nyika).
Ini handidi kupinda mumakakatanwa ezvematongerwo enyika, asi uyu mubvunzo werusununguko rweGNU Linux haufambirane nemutemo weChina
Uye iwe unoti haudi kupinda mumakakatanwa ezvematongerwo enyika ...? Damn, iwe unotaura zvese.
Iwe uchangobva kuratidza kuti unonzwisisa zvishoma sei nezve mahara software.
Ini ndinowanzo shandisa Deepin kuiisa muzvikoro uye nekuikurudzira kune vashandisi vemuhofisi, yakanaka kwazvo, inoyevedza uye inoenderana nemamwe mahofisi.
Uri benzi here kana urikunyepedzera kuva?
Ri @ akadaro
Deepin yakanaka OS, yakagadzikana, inoyevedza, ine chitoro chayo uye ine magiraidhi akanaka kwazvo, iro rondedzero chete nderekuti rinononoka maererano nekutora, ndakariedza uye chokwadi chakaratidzika kunge chakanaka, zvisinei nedunhu rako. , hativimbe nemitemo yenyika kwavanobva, asi pamabasa ainopa.
Pindura Ri @
Mhoro, ini ndoda kutanga kushandisa linux. Chii chaunokurudzira? Ndiri kuda chimwe chinhu pro .. Kutaura chokwadi, ini handinzwisise kuti kune zvakawanda zvakagoverwa, linux.Feduntu, kubunto, Xubunto, manjo, nezvimwe, nezvimwe. Ini ndinotofunga kuti MacOS ndeimwe vhezheni yeLinux kana ndiri kukanganisa?
Kana mumwe munhu ane ruzivo rwese rwehurongwa anogona kutora dambudziko kuti atsanangure nyaya iyi kwandiri, ndingafarire.
Zvichida zvinondibatsira kusarudza imwe yeakawanda mavhezheni eiyi os
Kwete, haisi imwe Linux distro. MacOS, chaizvo, inotorwa pane yainzi "Darwin" panguva iyoyo, inova UNIX-senge inoshanda sisitimu. Iyo poindi ndeyekuti Linux iri zvakare chikamu chemhuri iyi ye "UNIX Type", chaizvo i "kopi" yeMinix. Ivo vane zvakafanana mabviro.
Mhoroi, zvinonakidza sei kuona akawanda akakosha mipiro, ini ndaedza akati wandei ma distros, zvisinei ini ndinoda Deepin yevatangi, ipapo pane yekutanga, yezvikwata zvine mashoma zviwanikwa hapana chakafanana nelinux lite uye lubuntu
Shongwe yeBhabheri inonzi linux, iyo desktop. Iwe unopedza mazana emaawa kumisikidza-kuisa zvinhu zvina uye nekukasira kubvarura, mushure mekugadzirisa yako internet yekubatanidza haichashandi; mamwe maawa zana kuyedza kuigadzirisa kusvikira iwe wafinhwa iwe fomati uye iwe unomanikidzwa kudzorera icho chinotyisa icho chinonzi windows, icho chavanoti isisitimu yekushandisa asi hachina kumira kuva "kuyedza ku".
Nei isiri Slackware pano? Ndiyo dangwe GNU / Linux distro, kwandiri ndiyo yakanakisa iripo, iwe unofanirwa kuiongorora uye kuiisa nhamba yekutanga mune ino chinzvimbo.
Maonero iwayo akajairika. Iko kune kugoverwa kuri mukutarisira kwekuyedza zvidzoreredzo usati wazvimisikidza (kazhinji, chero munhu anobva paUbuntu anozviita, kunyanya Linux Mint, yakashoropodzwa nekunyatso chengetedza pamwe neyakagadziridzwa ichifarira kugadzikana).
Zvipe mumwe mukana, uye kana chinhu cheWiFi chikaitika kwauri zvakare ... ingo bvisa iyo yekuvandudza;)
Ini ndinofunga Linux Mint ndiyo yakanakisa distro, nekuti inokodzera kwazvo nemakomputa ekare uye zviri nyore kwazvo kugadzirisa uye mushandisi, futi. Naizvozvo, inofanirwa kutariswa kwakawanda.
MX Linux, iine XFCE, ingori yakanakisa, yakavakirwa paDebian.
bvumirana zvachose Jonathan uye pamusoro pazvo zvese, zvakakura zvevatsva (sezvandakaita, pasina kana munhu waakashaika)
Fedora ndiyo inoshandiswa naLinus Torvalds, kwandiri, wandapedza makore mazhinji ndichifamba uye kuyedza ese ma distros ibhomba rakachengeteka uye humbowo hwekuyedza. Kuti kana iwe uchida chengetedzo, ini handikurudzire Ubuntu kana Mint, ndoda Elementary, mune chero mamiriro OpenSuse Leap, asi Tumbleweed munguva pfupi inotevera ichapunzika, Debian, Manjaro, Deeping, Slackware, Parrot, Arch, nezvimwe, hazvina kushata , yega yega kune yake, asi sedesktop kukanganwa uye nekuvandudzwa pasina matambudziko, not even new versions: Fedora Gnome.
Deepin ndinoda ini ndapedza makore ndichishandisa akasiyana siyana kugovera, iyi yakajeka uye yakanyatsogadzirwa ... sekusvika pakunonoka kugadzirisa inyaya yekuchinja iyo default repository
Ndiri kufunga kuisa Ubuntu pamushini une 512 bm yegondohwe, inomhanya zvakanaka ???
Zvinoenderana nemamiriro edesktop aunoisa. Ndingati edza pakati pe xfce neumwe. Pamwe kana iwe uchinzwa kuti iri kunonoka iwe unogona kuyedza Antergos, zvimwe chete mu xfce, iri Arch nyore, yakanakisa uye inomhanya.
Kazhinji ndakaedza Debian, OpenSuse, Antergos, naFedora uye ini ndinoipfupisa seizvi:
> Debian: Chikara, chakatsiga uye pasina kupokana ndicho chakandipa mhedzisiro yakanaka (KDE5), inogona kunge iri spartan kana uchifanira kugadzirisa zvimwe zvinhu, asi nekuda kweizvozvo unodzidza zvakawanda uye ziva iyo terminal zviri nani.
> OpenSuse: Zvakanaka, iko kushandiswa hakusi kwepamusoro (KDE5) uye Yast2 chishandiso chakakura kugadzirisa nekuisa ese marudzi emapurogiramu. Kunyangwe dambudziko nebhatiri rangu ndiro raindichengetedza kubva kune ino distro.
> Antergos: Inokurumidza kwazvo, iri nyore kuisa, yakanaka kwazvo pakuona (gnome uye mate) uye chiitiko chakakura kuziva pacman. Iyo yakaipa poindi ndeyekuti yangu Laptop yaisakwanisa kutangazve mushure mekumisa kana kuvharisa laptop. Chero zvazvingaitika, ini ndinayo senge hombe OS yekombuta desktop uye inoshanda kwazvo.
> Fedora: Ndiyo yaive nematambudziko akawanda andaive nawo, ini handina chandaigona kuisa, haina kuona chero chero eangu madhiraivha uye nharaunda yedesktop (gnome) yakazvibata zvisingaite (kupenya, kutonhora). Pamwe pane imwe nguva ndichakupa mumwe mukana.
Pave nemakore maviri nehafu kubva pandakaiisa, uye zvaive zvisiri nyore, ndiko kuti kana izvo zvinyorwa zvewiki zvinobva kune imwe nyika.
Zvakawanda zvekuti ini ndaifanira kugadzira script yechipiri cheki kuti ishande, kunyange hazvo izvozvi neyakagadziriswa ini handichaishandisa nekuti inozviziva kana uchipinda.
Rakanaka pabasa, iwe unongoisa izvo zvaunoda, uye izvo zvinosiya zvichinyatsojeka.
Nenzira, yako saiti inonakidza kwazvo. Ndiri kuzoiwedzera kune andinofarira mablog.
Ndiine Ubuntu ndakave nematambudziko mazhinji nekuti inorembera nekuti tembiricha yeprosesa inokwira kusvika makumi mashanu nemashanu kana kupfuura uye inotonhora ndinoisa zvimwe zvinotonhodza uye ndochinja processor uye handifambe inopfuura maminetsi gumi neshanu. linux mint isarudzo iri nani pane ubuntu.
Debian pakukwiridzira kusvika 9 yakandibhadharisa boot dhisiki rakaomarara, pamwe yaive mhosva yangu, asi ndakaedza MXlinux uye ini ndinoikurudzira zvakanyanya.
Fedora ndeimwe yeakanakisa.
kana iwe uchida kuronga debian kana chinobva kudebian inogona kunge iri sarudzo. kunyangwe paine Slackware, Kali Linux maviri akanaka distros kuronga uye kuita Ethical Mabasa.
Ndakafarira chinyorwa chenyu.
Pindura kuna Evilknibal
Jose L. Prieto akadaro
Mhoroi Isaac. Ini ndinofanira kubvuma kuti ichi chinyorwa cherudzi "iyo yakanakisa distros ..." inotanga kudzokorora nekuti, pakupedzisira, hapana munhu anoda "kunyanyisa kunyorova". Zvichida nekuti hapana chaicho chiitiko nezvose zvinogoverwa, zvakajairwa. Chandisingachaone sechinyakare ndechekuti mashandiro esarudzo dzakasiyana haatombo fungirwa mune aya marudzi eongororo. Zvingave zvinonakidza kana, zviripachena, zvichibva pachikwata chimwe chete, tinogona kuziva vaverengi «vari kuita sei» ichi kana icho kugovera. Ndanga ndichishandisa GNU / Linux kwemakore mazhinji uye ini ndakaisa anopfuura rimwe distro kuti ndiibvise mushure memazuva mashoma (kana maminitsi) kuti ndione kuti haina chairo kufamba paPC nemakore mashoma. GNU / Linux kana FLOSS hazvibatsiri kana zvisiri mwenje. Kune mhuka isu tatova neWindows, uye chenjera, iyo gumi iri nani mune iyi pfungwa kupfuura akawanda ma distros, zvakanyanya sekurwadza kuinzwa. Ndicho chikonzero ndave ndichifanirwa kukwenya mudiwa wangu OpenSUSE kwemakore, kuisa muenzaniso unorwadza kwandiri, asiwo vamwe vanoverengeka. Parizvino ndiri kufara neChaletOS, yakavakirwa paDebian uye XFCE inova yakanaka, pamwe nekuve yakanakisa kugadzirisa. Solus inoshandawo zvakanaka, asi zvinotora nguva yakareba kuti itakure zvimwe zvinoshandiswa. Lite zvakare haina kunge inogadziriswa senge Serbian distro. Zvisinei, ini ndaizoda izvo: kwaizove nekutaura kwakawanda nezve ruzivo rwevashandisi uye kwete zvakanyanya nezve zvinhu sekuzviisa pasi sekugadzikana, aesthetics kana kunyanyo kuzivikanwa saamai vakabereka ichi kana icho distro. Mushandisi weWindows (watinofanira kutarisa zvakanyanya kana tisingade kuve mageek kuburikidza nehupenyu) haafarire hunyanzvi asi muchiitiko chemushandisi. Uye chivi chikuru chakaitwa mumaonero angu mukuongorora uku: mushure mekuyedza Neon neKaOS, plasmoid inogara ichisarudza yechipiri, yakanyanyisa kugwinya, yakanaka uye inoyevedza. Ndiwo maonero angu akajeka. Kwaziso yakanaka.
Pindura kuna Jose L. Prieto
Ini ndinoshandisa Lubuntu (yakavakirwa paUbuntu asi iine LXDE) uye inoshanda kwandiri
Octavio A akadaro
Mhoroi munhu wese !! Ndinoziva kuti patova nemwedzi mitanhatu kubvira munhu wekupedzisira akataura, asi ndinovimba ndinogona kusheedza vese. Imhaka yekuti ini handidi kuenda nenzira inonetesa yekusarudza distro zvakare uye nekusingaperi. Ini ndakamboedza Ubuntu ... asi handina kumbopedza kupinda muLinux. Nehurombo, ini ndinopfuurira neWindows 6 (ndinovenga gumi), asi inguva inguva yandakachinjira kuLinux nekuti iyo yekutanga kopi yeWindows yandinayo haisi kuzotsungirira kumwe kumisikidzwa kubva pakutanga (semikana yekuishandisa pasina matambudziko uye rimwe zuva, poof, iro rezinesi kodhi rinomira kushanda kana ndikaridzorera rakachena zvakare).
Zvisinei, izvo zvandiri kutsvaga ndezvekuudzwa kuti ndeupi mugove unosangana:
* KUCHENGETEKA: zviripachena, kukanganwa kuti vausingazive, mavairasi, maTrojans ari kundisora ​​... (zvakafanana nenguva, hazvizotora nguva kuti vanhu vakaipa vagadzire hutachiona hwe linux ...)
* Kupepuka uye kugadzikana: kudzivirira kushamisika.
* Yemazuva ano uye yazvino-kumusoro-: inogara ichigadziriswa kudzivirira matambudziko.
* Inoenderana neSteam: kugona kuramba uchidhakwa munguva yako yekusiya.
* Inoenderana neyangu Nvidia GTX 980ti kadhi revhidhiyo… Ndichatarisira iro kadhi kwehupenyu hwese. Kana ini ndichida kuchinjira kuLinux, ngazvive ne distro inoitsigira, kuibhanga uye nekuiremekedza.
* Kuti ndigone kuverenga NTFS disks, ini handidi kuisa panjodzi yekusakwanisa kuverenga akaomarara madhisiki neruzivo rwangu rwese.
* Uye ini handifunge chimwe chinhu ... nharaunda yedesktop, ini handina basa nazvo, asi kana chiri chakanaka, chakareruka asi chinonakidza nezvakawanda mibairo, zvirinani. Asi ini ndaigara ndichifunga kana paine nzira yekuita kuti iyo login yeiyo system inyatsogadziriswa, ndinoshamisika kana ichigona kunge iri muLinux.
Uye hapana chimwe chandinobvunza. Ini handisi kukumbira iwe kuti undigadzirire mangwanani, ngatiregei kuwedzeredza kana ... (Hazvingave zvakanaka here kana distro ikandiita madhora? Hahaha)
Kunoseka padivi, ndinokwazisa munhu wese uye ndinotarisira kuti munyori webhulogi auye nehurukuro yakaparadzana, kuitira kuti tese tigone kutaura nekurera nharaunda yakanaka.
Pindura kuna OctavioA
Theo Pineda akadaro
Ini ndakatanga kushandisa Ubunto, ndiyo yakanakisa, asi ini ndakachinja kuita deepin, yakanaka kwazvo, kunyangwe paine rumwe ruzivo, asi ndizvo zvandinoda pc yangu
Pindura Teo Pineda
Ingo taura, kuti ichi chinyorwa chiri kutanga kuve chidiki - chisingachashandi, uye zvinonyadzisa nekuti zvinonakidza zvevatsva uye, pamusoro pezvose, unazvo papeji rekutanga rewebhu (unovhura webhu kutsvaga nhau uye chinhu chekutanga chaunoona pabutiro rayo Chinyorwa kubva muna 2017 ... uye chinoita kuti ude kutiza) =.